ပြည်တွင်းဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်နှင့် ပြည်ပဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ် ရုံးဖွင့်လှစ်ခွင့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခြင်း | eYangon
ပြည်တွင်းဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်နှင့် ပြည်ပဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ် ရုံးဖွင့်လှစ်ခွင့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခြင်း
Thu, 12/19/2013 - 11:56
ပြည်တွင်းဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြရမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
• ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်မည့်အဖွဲ့အစည်းသည် ပထမဦးစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
• ကုမ္ပဏီ၏ အမည် (ဘဏ်၏အမည်) နှင့် တံဆိပ်သည် ရှင်းလင်းလွယ်ကူပြီး လွတ်ကင်းသော အမည်ဖြစ် ရပါမည်။(နိုင်ငံတကာရှိဘဏ်အမည်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိဘဏ်များ၏အမည်၊တံဆိပ် နှင့်
လွတ်ကင်းစေရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းသင့် ပါသည်။)
• ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နည်းဥပ ဒေများ အပိုဒ် - ၄ အရ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း/
နိုင်ငံခြားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ရုံးခွဲ/ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတစ်ခု၏လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက် လွှာပုံစံ (စီဘီအမ်-ဝ၁) ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်လိုင်စင်ကို လျှောက်ထားရပါမည်။
အထက်ပါစီဘီအမ်-ဝ၁နှင့်အတူ အောက်ပါအချက်များပူးတွဲတင်ပြလျှောက် ထားရပါမည်-
• ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း မိတ္တူတစ်စောင် (ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေပုဒ်မ- ၂၂ အရ)
• ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုဒ်မ - ၁၄ (က) အရ ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာချက်စာတမ်း (Feasibility Study)အားတင်ပြ ရမည်။ ယင်းစာတမ်းတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည်-
(ဃ) ရှေ့လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ခန့်မှန်းခြေအရှုံး/အမြတ်စာရင်း နှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
• စီမံခန့်ခွဲသူများ၏အရည်အချင်းတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသည့်သူပါရှိရမည်။
• ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်(Board of Directors)များ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင် (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် Banker တစ်ဦးပါရှိရပါမည်)
ပြည်ပ ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများမှ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
• One copy of the application should be sent inaprescribed form (CBM-01).
• A short history of the bank and financial standing regarding total assets value along with the annual report for last3years is required.
• A copy each of the memorandum and articles of association of the bank duly attested byanotary public must be attached to the application.
• Approval letter of their Central Bank or Ministry of Finance or Monetary Authority.
• A copy of the bank license or company register of the bank duly attested byanotary public must be attached to the application.
• ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လွဲနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ - ရှိပါသည်။
• တင်ပြရမည့်ပုံစံနမူနာများ -
ပြည်တွင်းဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်ပုံစံ (နောက်ဆက်တွဲ-က)
ပြည်ပဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြရမည့်ပုံစံ (နောက်ဆက်တွဲ-ခ)
လုပ်သားပြည်သူ များနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များမှလဲလှယ်လိုသော ဟောင်းနွမ်းငွေစက္ကူများကို အခြားတန်ဖိုးတူ ငွေစက္ကူများနှင့် လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ လဲလှယ်ခွင့်ရှိသော ချို့ယွင်းငွေစက္ကူများကို တန်ဖိုးလဲလှယ်ပေးခြင်းနှင့် FECs Redeeming Counter ကိုလည်းဖွင့်လှစ်၍ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
• မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ထောက်ခံစာ(မူရင်း)၊
• မီးလောင်ငွေစက္ကူအတွက်၊ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနထောက်ခံစာ(မူရင်း)၊
• ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ/ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့် လိုင်စင် (Money Changer Licence) အသစ် လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထား
• သက်ဆိုင်ရာဘဏ်အကြီးအကဲက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ (Letter Head)
• လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
• ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ရုံးသို့လာရောက်ဆောင်ရွက်မည့်သူအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ
• ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
• ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထား မူရင်း နှင့် မိတ္တူများ (သက်တမ်းရှိသောကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် ၊ Form 6, 26၊ Form E ၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း) မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် အတွက်ဖြစ်ပြီး
မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကို လာရောက်လျှောက်ထား သူထံပြန်လည် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
• ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် အတွက်ဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရွက်စာတမ်း များကို လာရောက်လျှောက်ထားသူထံပြန်လည် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။)
ဘဏ်မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့် လိုင်စင် (Money Changer Licence) လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ
• သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအကြီးအကဲက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ (Letter Head)
• လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
• ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
• A.D လိုင်စင်ရ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ကနဦး မတည်ရင်းနှီးငွေ အနည်းဆုံး ကျပ် ၃၀ သန်း (သို့မဟုတ်) ယင်းနှင့် ညီမျှသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ထည့်ဝင်ထားသည့် Bank Statement မူရင်း
• A.D လိုင်စင်ရ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်စာအုပ် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ (သို့) Bank Statement မူရင်း
• ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထားများ မူရင်း နှင့် မိတ္တူများ (ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ၊ Form 6,26 ၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း) မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် အတွက်ဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကို
လာရောက် လျှောက် ထားသူထံပြန်လည် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
• Form 26 တွင် ပါဝင်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အားလုံး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် ဓါတ်ပုံ
• တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေနှင့် နိုင်ငံခြားသုံး ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ တို့ကို သိရှိနားလည်၍ ယင်းဥပဒေများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ
• M.C Licence လျှောက်ထားရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မူရင်း
• လျှောက်ထားသူ၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက် မူရင်း
• လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (ဆိုင်းဘုတ် အနီးကပ် (၁) ပုံ ၊ လုပ်ငန်းအတွင်းပုံ (၁) ပုံ ၊ အပြင်ပုံ (၁) ပုံ )